रमेश प्रसाई र स्वेता खड्काको बैबाहिक जीवनबारे अलौकिक माताको यस्तो भविष्यवाणी (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > रमेश प्रसाई र स्वेता खड्काको बैबाहिक जीवनबारे अलौकिक माताको यस्तो भविष्यवाणी (भिडियो हेर्नुस्)
admin December 7, 2020 December 7, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाडौं । सबिता आचार्य उर्फ सबिता माता वा भनौ अलौकिक मतको बारेमा नसुन्ने नबुझ्ने त कमै होला र यदि तपाई युटुब हेर्नुहुन्छ भने त उनलाई चिन्नुहुन्न भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । हो आज हामि तिनै मातासंग सदाको जस्तै भबिष्यबाणी गरौन आएका छौ अहिलेका चर्चित नाम रमेश प्रसाई र उनकी हुनेवाली श्रीमती नन्दा सिंहको बारेमा । उनीहरुको बैबाहिक जीवन कस्तो जान्छ ? के हुन्छ के हुन्न ? लगायत बिबिध जानकारीहरु दिनुभएको छ ।
आज हामीले सबिता माताको अलौकिक शक्तिबाट थाहा पाउने कोशिश गर्दैछौ । रमेश प्रसाई पछिल्लो समय ‘रिंकेबुङको राँगो’को गीतका कारणले चर्चामा रहेका विवाह बन्धनमा बाँधिने छन् भोलि । उनले कालीकोटकी समाजसेवी नन्दा सिंहसँग विवाह गर्न लागेका हुन् । ३ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई रमेश र नन्दाले बिवाहमा परिणत गर्न लागेका हुन् ।
रमेशसँग आफ्नो विवाह हुन लागेको नन्दाले बताएकी थिइन। यहि २२ गते धरानमा नेपाली परम्पराअनुसार थोरै ब्यक्तिको उपस्थितिमा विवाह कार्यक्रम रहेको नन्दाले जानकारी दिइन् । राजनीतिक टिप्पणी गर्न पनि माहिर रमेश र कल्पना दाहालबीच केही अगाडि प्रेमको चर्चा मिडियामा चलेको थियो । हेर्नुहोस यस बारे माताले के भनिन त ?
पूर्वपतिको बिहे हुने पक्का भएपछि मीना भन्छिन् : “घरमा राजतन्त्र ल्याउन मन लाग्यो”